म्याग्दीमा भयो चमत्कार! मुटुको चा ल ब न्द भै सकेको बिरामीलाई यसरी बचाए डाक्टरले (भिडियो सहित) – Dainik Samchar
म्याग्दीमा भयो चमत्कार! मुटुको चा ल ब न्द भै सकेको बिरामीलाई यसरी बचाए डाक्टरले (भिडियो सहित)
June 5, 2021 379
बेनी नगरपालिका–६,डम्बराका ५५ बर्षिय ती मधुमेहका बिरामीको मुटुको चा ल अचानक ब न्द भ ए को थियो । विगत १० दिनदेखि अस्पतालमा उपचारार्थ उनको मधुमेहकै कारण खुट्टा बिग्रेपछि शल्यक्रियापछि स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको थियो ।
नियमित चेकजाँचको क्रममा डा. नवराज बस्ताकोटीले बिरामीको मुटुको चाल अचानक ब न्द भ ए को देखेपछि स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा करिब ८ मिनेट सिपिआरको माध्यमबाट काम गर्न छो डे को मुटुलाई जगाउन सफल हुनुभयो ।
दोस्रोपटक करिब ३० सेकेण्ड मु टु को चा ल ब न्द भ ए पछि डा. बस्ताकोटी, डा. डालिम काफ्ले सहित स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले १६ मिनेट सिपिआर विधिबाट पुनः होस फर्काउने कार्यमा सफलता मिल्यो ।
बिरामीको अवस्थालाई हेर्दा बाँच्ने आस मा रि सकेको अवस्थामा समेत चमत्कारी सुधार भएको डा. बस्ताकोटीले बताउनुभयो । ‘दुई पटक मुटुको चाल बन्द भयो, पहिलोपटक सुधार भएपछि दोस्रोपटक झन जटिल समस्या देखिएपछि आस मा रे पनि जगाउने प्रयास गरियो’डा. बस्ताकोटीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार बिरामीमा चमत्कारी सुधार आएको छ। हृदय घा त भएर ढ ले का बिरामीको मुटुलाई पनि यो उपचार विधिबाट पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिने भएकाले यसका बारेमा थप जानकारी दिने डा. बास्ताकोटीको योजना छ ।
शरीरमा र क्त सञ्चार भएर बिरामीको ज्यान जोगिने विधि भएकाले यस बारेमा सन्देश फैलाउने डा. बस्ताकोटीले बताएको समाचार बेनी अनलाईनमा हरिकृष्ण गौतमले लेखेका छन् । तस्वीर र भिडियो सहितको समाचार हामीले बेनी अनलाईनबाट साभार गरेका हौं ।
Prevकोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्ने तयारी
Nextबेहुलीको विवाह मण्डपमा मृ’त्यु, बेहुलाले गरे बहिनीसँग विवाह
एजिलाको जन्मदिनमा धमलाले यति मंहगो उपहार दिँदै सबैका अगाडी चु म्बन गर्दा भावुक बनिन् एलिजा (तस्बिर र भिडियो सहित )
भागरथीको ज्या’न लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका निदेश नाबालक हुन सक्ने, जेल होइन उनलाई सुधार गृहमा पठाइने
काठमाडाैंको काभ्रेस्थलीबाट अचम्मकी महिला पक्राउ (5587)
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (4844)
टिकटकमा मुुठ्ठी ठोक्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना, के छ उनको यति ठूलो आयस्राेत ? (4327)